စိတ်ဆင်းရဲမှု အတုအယောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » စိတ်ဆင်းရဲမှု အတုအယောင်
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Feb 22, 2014 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy | 22 comments
တမြန်နေ့က သားကိုထိန်းမနိုင်တာနဲ့ ထိန်းလို့ရလိုရငြား ရွှေဘုန်းမြင့်ဘုရားကို ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာ ကလေးတစ်ဦးကို မိဘတွေက ဘယ်ညာတွဲပြီး လမ်းလျှောက်သင်ပေးနေကြတယ်။ ကလေးက ပိန်လှီပြီး လမ်းလျှောက်ဖို့နေနေသာသာ မတ်တတ်တောင်မရပ်နိုင်သေး။ ကျမသား နင်းကန်ပြေးနေရာကနေ သူတို့နားရောက်သွားတော့ ကလေးမိဘတွေနဲ့ ကျမ စကားစမြည်ပြောရာကနေ စကားဝိုင်းလေး စည်ခဲ့တယ်။ သူတို့သားလေးက ၁ နှစ်နဲ့ ၃လ၊ ကျမသားက ၁ နှစ်နဲ့ ၂လ။ သန်စွမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုခြင်းက ခေါက်ချိုးလောက်ကွာတယ်။ ကျမက နို့ဘူးတိုက်မွေးခဲ့ကြောင်းပြောပြဖြစ်တော့ ဟိုဘက်က အမေလုပ်တဲ့သူ အံ့သြသွားတယ်။ သူတို့သားလေးက ဘာရောဂါမှ မရှိဘဲ သန်သန်စွမ်းစွမ်း မရှိလှဘူး။ အရယ်အပြုံး တွေနဲ့ အလုပ်များနေသင့်ပြီဖြစ်တဲ့ မျက်နှာလေးက တွေတွေလေး။ မိဘတွေကိုကြည့်တော့ ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ နဲ့ မရှိမရှားထဲက။ သားလေးကို မချိ ပြုံး ပြုံးပြီး ကြည့်နေကြရှာတယ်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးထားတဲ့ သူတို့ကလေးက နို့ဘူးတိုက်မွေးတဲ့ ကျမကလေးလောက် မသန်စွမ်းတာ သူတို့အတွက်လည်း အသစ်အဆန်းဖြစ်နေရပြီ။
နယ်မြို့က ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ကျမ မီးဖွားတုန်းက သားဖွားဆောင်ထဲ ဆရာဝန်ကြီး ရောင်းလှည့်ပြီဆိုရင် ခုတင်ဘေးက ဗီရိုပုလေးပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ နို့မှုန့်ဘူး တင်မထားရဲဘူး။ နို့မှုန့်ဘူးတွေ့သွားရင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဆူကြပူကြတာမို့ မမြင်အောင်ဝှက်ထားကြတာပါ။ တကယ်က နို့မှုန့်ဘူးလည်း ဒီအချိန်မှာ မလိုအပ်ပါဘူး။ အကြောင်းက မိခင်အများစုဟာ မီးဖွားပြီးပြီးချင်းမှာ နို့ချက်ချင်းမထွက်တတ်ကြသလို မွေးကင်းစ ကလေးကိုလည်း မိခင်နဲ့အတူ ပေးမနေပါဘူး။ ကလေးဆောင်မှာ ထားပြီး နို့မှုန့်ဖျော်ထားတဲ့ နို့ရည်ကိုပဲ သူနာပြုတွေက ဇွန်းကလေးနဲ့ တိုက်ပေးကြတာပါ။ သုံးလေးရက်နေမှ မိခင်နို့ကောင်းကောင်းထွက်ပြီဆိုမှ ကလေးအပ်ကြပါတယ်။
-ဆေးရုံကြီးမှာ မိခင်နို့တိုက်ပုံကို ရုပ်ပုံတွေနဲ့တကွ အသေအချာ ပညာပေးထားတယ်။ ကလေးပါးစပ်ထဲကို နို့သီးခေါင်း အပြည့်အ၀၀င်အောင်၊ နို့လိုက်အောင် နို့ညှစ်ပုံ လက်အနေအထား၊ ကလေးအသက်အရွယ်အလိုက် စားသောက်ရမယ့် ဖြည့်စွက်အစားအစာတွေရယ်၊ မိခင် အစားမရှောင်ဖုိ့ရယ်၊ ပြီးတော့ ဆေးရုံမှာ လိုက်နာရမယ့် အရေးကြီးဆုံး စည်းကမ်းချက်အနေနဲ့ နို့မှုန့် ကုမ္ပဏီမှ ပေးသော ချိုလိမ်၊ အရုပ် စသည့်လက်ဆောင်များ လက်မခံရ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ရယ်၊ မိခင်နို့သည်သာ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ရယ်၊ စတာတွေကို ပညာပေးရေးကပ်ထားကြပါတယ်။ မိခင်တွေကိုလည်း သူနာပြုဆရာမတွေက အမြဲ တတွတ်တွတ်ပြောဆိုပြီး အသိပညာပေးကြပါတယ်။
-ကျမသား ၆လရွယ်မှာ ပါးစပ်ထဲတွေ့ကရာ ကောက်ထည့်လို့ ၀မ်းပျက်ပြီး ဆေးရုံကြီးကို ကျမ နောက်တစ်ခေါက် ရောက်ရပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သားဖွားဆောင်မဟုတ်၊ ကလေးဖျားနာဆောင်။ ပညာပေးဟာကွက် အကြီးကြီးကို ကျမ အဲဒီမှာ စတွေ့ခဲ့တာပါ။ ပိန်ညှောင်နေတဲ့ ကလေးအများစု ဘာတွေစားသောက်နေကြရတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ မိခင် အများစုက နို့ကောင်းကောင်းမထွက်ဘူး။ အဲဒီတော့ မိခင်နို့ မထွက်ရင် ကလေးကို ဘာကျွေးရမလဲဆိုတာ သူတို့ အသိပညာပေးထားခြင်း မခံခဲ့ရဘူး။ မိခင်နို့မထွက်တဲ့ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း သားကိုနို့တိုက်ရေးအတွက် စမ်းတ၀ါးဝါး လုပ်ခဲ့ရတာ။
ပထမအကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ မိခင်နို့ကို မရရင် ဒုတိယအကောင်းဆုံးက ဘာလဲ ဆိုတာကို ဆေးရုံက ပညာမပေးခဲ့ဘူး။ plan B ကို လုံးဝမသင်ကြားပေးခဲ့ဘူး။ ပထမအကောင်းဆုံးကို လုံလောက်စွာမရရင် ဒုတိယအကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိ မိခင်တွေမှာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ၄လသား ကလေးကို pep နို့မှုန့်ဖျော်တိုက်လိုတိုက်၊ ၉ လသားကလေးကို ခနောဆန်ပြုတ်တိုက်လိုတိုက်၊ မဟုတ်တာတွေ မျိုး စုံကို ကြုံ ခဲ့ရတယ်။ ဆရာဝန်တွေကတော့ ဒါတွေကို မသိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ နို့မှုန့်တွေ၊ နို့ဘူးတွေ၊ တခြား မဟုတ်မဟပ်လို့ ထင်ရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မိခင်တွေက ခုတင်ဘေးက ဗီရိုပုလေးထဲ သိမ်းတန်သိမ်း၊ ခုတင်အောက် ဆွဲခြင်းထဲ ထည့်တန်ထည့်နဲ့ ဆရာဝန်တွေ မမြင်စေရအောင် လက်စလက်နဖျောက်ထားလိုက်ကြလို့ပါ။
-ဆေးရုံပေါ်မှာ ကျမသားကို Dumex နို့မှုန့်ဖျော်တိုက်တယ်။ ဘေးခုတင်က မိခင်တစ်ဦးက – ဟာ အစ်မ နို့မှုန့်က မကောင်းဘူး၊ မတိုက်ရဘူး၊ ထမင်းရည်ကျဲကျဲ ဖျော်တိုက်ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒုတိယအကောင်းဆုံးကို သူမသိတာ မဆန်းဘူး။ ဒီကနေ့အထိ လက်လှမ်းမီသမျှ သားသည်မအေတွေကို ကလေးကို ဘာကျွေးသလဲ၊ နို့မ၀ရင် ဘာတိုက်သလဲ မေးကြည့်ရင် ဒုတိယအကောင်းဆုံးဟာ ကလေးနို့မှုန့်ဖြစ်ကြောင်း သိတဲ့လူ ရှိတော့ရှိပေမယ့် အားကောင်းခိုင်မာတဲ့ အသိ မဟုတ်ဘူး။
-ကျမ သား ၀မ်းမရပ်လို့ ကျမ ရန်ကုန်ကိုပြေးခဲ့ရတယ်။ သမားတော်ဆေးခန်းက ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစော က Dumex Gold ကိုတိုက်ခိုင်းတာနဲ့ အဲဒီ နို့မှုန့် နှစ်ဘူးအကုန်မှာ သားလည်း အကောင်းပကတိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျမ နို့မှုန့်ကြော်ငြာဝင်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သားဖွားဆောင်မှာတုန်းက မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးရေးကို အပြင်းအထန်လုပ်ခဲ့ကြတော့ နို့မှုန့်ဟာ သုံးကောင်းစရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားကိုရောက်ခဲ့တယ်။ နို့မှုန့်သုံးတာကပဲ အပြစ်ရှိသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။
-လက်တွေ့မှာ မိခင်အတော်များများ နို့သိပ်မလိုက်ဘူး။ ကလေး ၃လကျော်ပြီဆိုရင် ကလေးရဲ့တောင်းဆိုမှုက မြင့်လာပြီ။ အမေက နို့ကောင်းကောင်းမထွက်တော့ရင် ကလေးက နို့မ၀ဘဲ နို့စို့ရတာ အာညောင်းပြီး နို့သီးခေါင်း ပါးစပ်တပ်လျက်သား အိပ်ပျော်သွားကြတယ်။ နို့ဘူးဖျော်တိုက်တော့လည်း အလွယ်ကြိုက်ပြီး မိခင်နို့ကောင်းကောင်း မစို့တော့မှာ စိုးရတယ်။ တချို့မိခင်တွေအနေနဲ့ မိခင်နို့ရော နို့ဘူးရော နှစ်မျိုးလုံး တိုက်နိုင်အောင် ကျင့်ပြီး နို့လုံးဝနီးပါး မထွက်တော့တဲ့ မိခင်တွေကိုတော့ နို့ဘူးတိုက်ဖို့ ပညာပေးသင့်ပါတယ်။ ခုတော့ ထမင်းရည်တို့၊ နို့ဆီကို ဖျော်ထားတာတို့၊ pep နို့မှုန့်တို့နဲ့ စခန်းသွားနေကြတယ်။ နို့မှုန့်တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်နို့မှုန့်ဟာ စိတ်ချရတယ်၊ ကောင်းတယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ ကျမလည်း Dumex တိုက်နေရင်း နယူးဇီလန်က နို့ထွက်ပစ္စည်း ပြဿ နာပေါ်တာနဲ့တိုးတော့ Mylac အပါအ၀င် တခြားကောင်းနိုးရာရာတံဆိပ်တွေ ၀ယ်သုံးရတယ်။ Dumex က batch no. မတူကြောင်း ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပေမယ့် ကျမတို့အဖို့မှာ သံသယ၀င်ခဲ့ရပြီ။ ဘယ်ဆေးရုံကမှ စိတ်ချရတဲ့ နို့မှုန့်အမျိုးအစားကို တရားဝင်ကြေငြာမပေးဘူး။
ဟိုခေတ်ကဆိုရင် ရေပေါ်ဆီမမတွေ ရင်သားအလှပျက်မှာစိုးတာရယ်၊ အပျင်းဦးစီးတာရယ်ကြောင့် ကလေးကို နို့ဘူးတိုက်ကြကြောင်း သိခဲ့ရတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ဒီအတွေးမျိုး မရှိကြတော့ပါဘူး။ ကလေးမအေတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ နို့မှုန့်ဈေးကြီးလို့ မိခင်နို့ကိုပဲ တိုက်ချင်ကြတာပါ။ ဒီလိုအနေအထားမှာ ဆေးရုံကနေ နို့မှုန့်ဟာ မသုံးကောင်းလောက်တဲ့ အနေအထားရောက်အောင် မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးရေးကို အပြင်းအထန် ပညာပေးကြတော့ နို့မှုန့်ဘိုးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ မခံဖို့ တွန်းအားပေး လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ နို့မှုန့် ကုမ္ပဏီတွေရယ်၊ ကလေးသုံးပစ္စည်း ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ (ဥပမာ my baby diapers) က ကလေး ၃နှစ်သားအထိ တောင်းဆိုမှုအပေါ်မူတည်ပြီး နို့ဘူးတိုက်သင့်ပါသည် လို့ ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေ ထုတ်ကြပေမယ့် ဆေးရုံကနေ တရားဝင်ပြောကြားခြင်းကို ဘယ်လိုမှ မမီနိုင်ပါဘူး။
-ပြီးတော့တခါ မြန်မာအယူအဆက မီးနေသည်တွေ အစားရှောင်ရတယ်။ ရှောင်ရတဲ့ အစားအစာတွေ များလွန်းတော့ နောက်ဆုံး ငခြောက်ဖုတ်ဆီဆမ်းနဲ့ ဟင်းခါးပဲ စားစရာကျန်တော့တယ်။ ဆေးရုံမှာကတော့ မိခင်တွေ အာဟာရပြည့်ဝမှ နို့ထွက်ကောင်းပြီး ကလေးအာဟာရပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ သီဝရီအရ မိခင်တွေ အစားလုံးဝ မရှောင်ဖို့ ပညာပေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားသင့်တာက မိခင်အစားမရှောင်ရဆိုတာ နိုင်ငံတကာ သုတေသနရဲ့ ရလဒ်။ နိုင်ငံတကာ သုတေသနဆိုတော့ မှားပါတယ်လို့ ငြင်းလို့မရ။ သို့သော် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အစားအသောက်ကတော့ တခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ မြန်မာဟင်းတွေက ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ပါတာများလေတော့ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးစားပြီး ကလေးကို နို့တိုက်ကြည့်၊ အဲဒီကလေး တစ်ညလုံး လေထိုးပြီး အော်တော့တာပဲ။ ဟိုဘက်ဒီဘက် အစွန်းသိပ်မရောက်ဘဲ ပြည်တွင်းမှာ လက်တွေ့ကျကျ သုတေသနပြု ထားပြီးသားကိုပဲ မြန်မာပြည်သီးသန့်ပညာပေးအဖြစ် သုံးစေချင်ပါတယ်။ အစားရှောင်ရေး မရှောင်ရေးဟာ ခုချိန်ထိ မိခင်တွေကြားထဲမှာ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်နေရတုန်းကိစ္စပါ။ ရှောင်ရမယ့် အစားအစာအတိအကျကို ဆေးရုံကထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရင် (ဥပမာ ဒညင်းသီး၊ ကုလားအော်သီး၊ ကျွဲရိုင်းအချို ရည် စသည်ဖြင့်) ရပ်ကွက်ထဲက အခမဲ့ကျူ ရှင်ဆရာမတွေ စောဒက မတက်နိုင်တော့ပါ။ မဟုတ်ရင် အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ မိခင်ဟာ ဟိုလူ့စကားဟုတ်နိုး ဒီလူ့စကား ဟုတ်နိုးနဲ့ ဒုက္ခများနိုင်ပါတယ်။
-ဆေးရုံနဲု့ ဆေးပေးခန်းတွေမှာ ရေးကပ်ထားတဲ့ ဖြည့်စွက်စာပညာပေးမှာ ဆန်ထဲကို ပဲနည်းနည်းထည့်၊ ပဲဆီနည်းနည်းထည့််ပြီး နူးအောင်ကျိုထားတာကို ကနဦးဖြည့်စွက်စာအဖြစ် ဖော်ပြထားတယ်။ နောက်တော့မှ အသားနဲ့ အသီးအရွက် ကြိတ်ချေထားတာကို ကျွေးရပါမယ်။ လက်တွေ့မှာ အဲဒါမျိုး ကျွေးတဲ့ မိခင် ဘယ်နှဦးရှိနိုင်မလဲ။ ကုလားပဲလို ပဲ ကို ညကတည်းက ရေစိမ်ထားတယ်ပဲထားဦး၊ အဲဒီ အစာ နူးသွားအောင် မီးသွေး ၅၀သား လောက် သုံးရမယ်။ ပြီးတော့ ပဲဆီအစစ် ရှာရခက်တယ်။
-ဖြည့်စွက်စာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုံစံက ထမင်းကို ပိတ်စိမ်းပါးနဲ့တိုက်ချ ၊ အဲဒါကို ပြန်ကျိုပြီး ကျွေးကြတယ်။ ဒါကို ကြာကြာသိပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ များသောအားဖြင့် ထမင်းကို ၀ါးကျွေးကြပါတယ်။ ထမင်းဝါးကျွေးတဲ့ကိစ္စကို ပေါ့သေးသေး မမှတ်စေလိုပါ။ ကျမသမီးကိုမွေးတုန်းက အမျိုးသားဘက်က ဆွေတွေမျိုးတွေ တအုံတမကြီးက တူမလေးကိုချစ်လှချည်ရဲ့ဆိုပြီး လက်ပေါ်က မချသလို ကလေးနည်းနည်းကြီးတော့ ၀ါးကျွေးကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေ ပါပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ကျမ၊ တစ်ရွာနဲ့တစ်ယောက် အတိုက်အခံဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့ လူသိရှင်ကြားဇာတ်လမ်းပါ။
ခံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် ကလေးကိုဝါးမကျွေးသင့်ကြောင်း ကလေးပညာပေးစာအုပ်တွေထဲမှာပါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ဆေးရုံကြီးမှာ ဘာမှ အသိပေးမထားဘူး။ မိခင်နို့သည်သာ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လို မည်သည့်အရွယ်ကလေးကိုမှ ၀ါးမကျွေးရ ဆိုတဲ့ ပြတ်သားတိကျတဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဆေးရုံကြီးမှာမရှိတာ ပညာပေးဟာကွက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ မှန်းတာ မမှားဘူးဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ကလေး၁၀ဦးမှာ ၅ ဦးလောက်က ၀ါးကျွေးတာခံနေရနိုင်တယ်။ ကျမရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေအားလုံး (အားလုံးမှအားလုံး) ကလေးကို ၀ါးကျွေးတယ်။ သူတို့က သွားတိုက်ထားပြီးပြီလို့ ဆင်ခြေပေးတယ်။ ဒီလိုကျွေးမှ ကလေးက ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ တကယ်က ကလေးတွေ အပျော့စား ၀မ်းလျှောနေကြတယ်။
ဒီတော့ ဖြည့်စွက်စာ မှာလည်း plan B ရှိသင့်ပါတယ်။ အကြာကြီးချက်မကျွေးနိုင်တဲ့အတွက် ၀ါးကျွေးမလား၊ အာဟာရမှုန့် သုံးသင့်သလား၊ သုံးသင့်တယ်ဆိုရင် ဘယ်တံဆိပ်က စိတ်ချရသလဲဆိုတာ ကျမတို့လိုပြည်သူတွေကြားထဲ ရောက်သွားအောင် ပညာပေးသင့်ပါတယ်။
-သေးခံ (diapers) သုံးစွဲရေး နဲ့ မိခင်နို့
မိခင်တွေကို အချိန်တော်တော်ကြာကြာ နို့ထွက်ကောင်းနေစေချင်ရင် ကလေးသေးခံ သုံးကြဖို့ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ ပညာပေးစေလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ များသောအားဖြင့် ရာသီဥတု ပူတဲ့အတွက် ကြောင့်ရော၊ တစ်ခါသုံး သေးခံတွေ ဈေးမသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရော မြန်မာမိခင်တွေ ကလေးသေးခံသုံးလေ့မရှိဘဲ အပင်ပန်းခံ အနှီးလျှော်ကြပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ ပညာပေးထားပုံကတော့ မိခင်ရဲ့ နို့ထွက်အားဟာ မိခင်နဲ့မဆိုင်ဘဲ ကလေးရဲ့ နို့စုပ်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့သာဆိုင်ကြောင်း၊ ကလေးအာခေါင်ထဲထိ နို့သီးခေါင်းဝင်ပြီး နည်းမှန်စွာနို့စို့မှ ကလေးက နို့စို့လေ၊ မိခင်က နို့လိုက်လေ ဖြစ်မယ့်အကြောင်း သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ပထမလအနည်းငယ်မှာတော့ မှန်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာကတော့ မိခင်တွေ နို့သိပ်မထွက်ခြင်းရဲ့ လက်သည်တရားခံဟာ ပင်ပန်းခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီး ၃-၄လနေရင် ၀ိုင်းဝန်းကူတဲ့ ဆွေမျိုးညာတကာတွေလည်း ပြန်ကြပြီ။ လောကဓမ္မတာအရ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြာရှည်ကူညီနိုင်စွမ်းမရှိတော့ ကလေးတစ်ခါမွေးရင် အပင်ပန်းဆုံးက မိခင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ နေ့ဘက် မသက်သာရင် ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်မှ မိခင်ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ညဘက် ကလေးသေးစိုပြီး ခဏခဏထမလဲရအောင် (ဒါတောင် ကလေး ၁နှစ်သားအထိ ညဘက်နို့ထတိုက်ရတဲ့အကြိမ်ပေါင်း ၄ -၅ ကြိမ်လောက်ရှိတယ်။ ) ကလေးသေးခံကို ညပိုင်းသုံးပေးကြဖို့ မိခင်တွေကို ဆေးရုံမှ ပညာပေးစေချင်ပါတယ်။ မိခင်ဟာ တန်သင့်သလောက် အိပ်ရေးဝမှ နို့ထွက်ကောင်းမှာပါ။
အမေ့ကိုသာ နို့ပိန်တွယ် တွယ်တဲ့ သားလူကလေးရယ်
အရပ်ထဲ ခြေစကြာဖြန့်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွဲလောင်းမိခင်တွေကို တွေ့ရမှ သေချာသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံကြီးစည်ရာတွေးတယ်လို့ပဲဆိုဆို မြန်မာအမျိုးသမီးအများစုရဲ့ နို့အုံအရွယ်အစားဟာ ကလေးတစ်ဦးလိုအပ်ချက် ပြည့်မီအောင် ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ပါ့မလားလို့ တွေးမိတယ်။ မီးဖွားပြီးကာစနဲ့ ကလေး ၆ လသားလောက်အထိကတော့ မိခင်တချို့ နို့ရည်တွေ ညှစ်ထုတ်ပစ်ရတဲ့အထိ နို့ထွက်အားကောင်းကြတယ်။ သို့သော် ကလေးနို့စို့အားကောင်းတဲ့ ၁ နှစ်သားလောက်ဆိုရင် မိခင်တွေရဲ့ သက်ဝင်ရွှေအိုးနှစ်လုံးလည်း အကြောင်းအမျိုး မျိုးနဲ့ ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ကလေးကို ၄ လသားအထိ မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေးဖို့ ဆေးရုံက ပညာပေးခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးအာဟာရအတွက် မလောက်ငတဲ့ မိခင်နို့ရယ် ဖြည့်စွက်စာရယ် – ဒီနှစ်မျိုး နဲ့ပြီးမပြီး ကျမတို့ တိတိကျကျ မသိဘူး။ ကျမ အထင်မှာ ဖြည့်စွက်စာကိုလည်းကျွေး၊ မလုံလောက်တော့တဲ့ မိခင်နို့နေရာမှာ နို့ဘူးလည်း တိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကျမသားနဲ့သမီး နှစ်ဦးစလုံး Dumex တန်ခိုးနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးစလုံး ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာတာ ကိ်ုယ်တွေ့ဖြစ်လို့ ဒီအကြံဥာဏ်ကို ပေးချင်တာပါ။ ကျမတို့အနေနဲ့ ပထမအကောင်းဆုံးကို လုံလုံလောက်လောက်မရရင် ဒုတိယအကောင်းဆုံးကို လက်လွှတ်မခံသင့်ပါ။ စတေးရတာက ကလေးရဲ့ အနာဂတ် ဆိုတာကို မမေ့စေချင်ပါ။
-မြန်မာပြည်မှာ အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေး သုံးဦးလျှင်တစ်ဦးနှုန်း အာဟာရမပြည့်ဝတဲ့အကြောင်း ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်း သိပ်မသေးဘူး။ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာဆိုရင် ကလေးပေါင်း သန်းချီ နိုင်တယ်။ ကလေး၂သန်းခွဲ အရပ်အမောင်း လူစဉ်မမီနိုင်တော့ပါဆိုတဲ့ သတင်းကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရတော့ ဒီပမာဏနဲ့ နောင်အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုများ ဆက်ပြီး မောင်းနှင်ကြမလဲတွေးမိရင်း ရင်မောရပါတော့တယ်။ အာဟာရမပြည့်ဝမှု ပြဿ နာကို တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတေမှုအပေါ်မှာချည်း အပြစ်ပုံမချဘဲ မိခင်တွေကို ကလေးအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီး plan B ကို အတိအလင်းပညာပေးစေချင်ပါတယ်။
”ကလေးက ပိန်တယ်၊ လတ်တလော အာဟာရလဲ ချို့တဲ့မယ် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ သေနှုန်းက သာမာန် ကလေးထက် ကိုးဆ ပိုမြင့်မယ်။ မြန်မာမှာ တစ်နှစ်ကို ပျှမ်းမျှ ကလေး ကိုးသိန်းလောက်မွေးနေတယ်။ အသက် သုံးနှစ် မတိုင်မီ ကလေးသုံး သောင်း ခုနစ်ထောင် လောက်ကို သေသွားတယ်။ တစ်ကယ်လို့ အာ ဟာရ မြှင့်တင်တဲ့ နေရာမှာ ၉၉ ရာ ခိုင်နှုန်း လွှမ်းခြုံမှု ရရင် တစ်နှစ်တစ် နှစ်မှာ ကလေး တစ်သောင်း လောက်ကို ကောင်းကောင်း ကယ်နိုင်မယ်” လို့ ယူနီဆက်ဖ် မြန်မာမှ အာဟာရ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ကျော်ဝင်းစိန်က သတိပေးပြော ကြားထားပါတယ်။
-နို့မှုန့်ဘူးနဲ့ ကလေးသုံးပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် အပိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်၊ ပန်းကန်လုံး စတာတွေရပါတယ်။ ဆေးရုံကစည်းကမ်းချက်မှာ နို့မှုန့်ကုမ္ပဏီများမှပေးသော မည်သည့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုမှ လက်မခံရလို့ ဆိုထားပါတယ်။ နို့မှုန့်ကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ ဆေးရုံရဲ့ ကလေးဖျားနာဆောင်ကို သွားလေ့လာမယ်ဆိုရင် နို့မှုန့်လိုအပ်ချက် ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုတာ ရင်နာစရာကောင်းလောက်အောင် မျက်မြင်ဒိဌ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေကို နို့မှုန့် ကြော်ငြာသဘောဆန်တဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအစား စေတနာမှန်တဲ့ နို့မှုန့်ကိုသာလျှင် ပံ့ပိုးပေးကမ်းသင့်တယ်လို့ အားကိုးတကြီး ဆိုပါရစေ။
-်သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ကျမသားကြောင့် ကျမမှာ ပင်ပန်းတဲ့အကြောင်း၊ စိတ်ညစ်လှပြီဖြစ်ကြောင်း တနေ့တနေ့ လာသမျှဧည့်သည်တိုင်းကို ကျမ ညည်းပြနေမိတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ စိတ်ဆင်းရဲမှု အတုအယောင်သာလျှင်ဖြစ်တယ်။ တကယ့်စိတ်ဆင်းရဲမှု အစစ်အမှန်က ဘယ်တော့လာမလဲဆိုရင် ကလေးငြိမ်သွားပြီဆိုမှ။ ကလေးငြိမ်သွားပြီဆိုမှ ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ ပကတိစိတ်ဆင်းရဲမှုကို မိဘတွေ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ ရွှေဘုန်းမြင့်ဘုရားမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ကလေးမိဘတွေမျက်နှာပေါ်က မချိပြုံးက ဒီအကြောင်း ရေးဖြစ်အောင် ကျမကို တွန်းအားပေးခဲ့တာပါ။ သားသားမီးမီးတွေ အားလုံး ကိုယ့်မိဘကိုယ် စိတ်ဆင်းရဲမှုအတုအယောင်တွေ အများကြီးပေးနိုင်စေဖို့ တစ်ယောက်တစ်လက် အသိပညာဖလှယ်ပြီး ပညာပေးဟာကွက်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်အောင် ကူညီညာဝိုင်းကြပါစို့။ ။
alinsett ( Gazette ) says:
မိခင်တွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို လိုက်လို့တော့ဖြင့် မမှီသေးပါဘူးဗျာ
အတုအယောင်ဆိုတဲ့စစကားလုံး သုံးပြီး အစစ်အမှန်တစ်ခုကို ရှာဖွေတင်ပြသွားတာလေး. . . .
ဖတ်ရှု ခံစား တွေးတော သွားပါတယ် အစ်မရေ
အမြဲတမ်း စိတ်မောခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ စိတ်ထဲတေးထားလိုက် ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့။ ခုတော့ တော်တော်တန်တန် ငွေသုံးနိုင်တဲ့ မိဘတွေကတောင် ကလေးပိန်ညှောင်တွေ မွေးထုတ်နေလို့ စိုးရိမ်ပြီး ရေးတာပါ။ ဒါက ပညာရှင်ကဏ္ဍ ဆိုတော့ သိပ်မရေးရဲဘူး ကိုသူရရေ။
ဂျာနယ် ကိုပါပို့သင့်ကြောင်းပါ ဆရာမရေ ..
ဟုတ်တယ် စီဂျေကြီး။ စီဂျေကြီး ပြောမှ ကျမ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျမရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ရန်ကုန်နယ်မြေ နဲ့ အလှမ်းဝေးနေတာပါပဲ။ အခု ဂျာနယ်ကို ပို့ချင်တယ်။ ပို့ချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ – ကျန်းမာရေးပညာပေးဆိုရင် ဆရာဝန်တွေ သမားတော်တွေသာ ရေးလေ့ရှိတယ်။ အထက်က (သမားတော်တွေ) ချပေးတဲ့ နည်းလမ်း ဥပဒေသကို အောက်ကလူတွေက လက်တွေ့မှာ လိုက်နာဖို့ ခက်ခဲနေတယ်။ ဒါကို ထုတ်ဖော်ပြောမယ့် ပြည်သူထဲက (အခြေခံကျကျ ပြည်သူ) ပြည်သူ့အသံ မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ဒီပို့စ်ကို စကားပြောနဲ့ရေးထားပေမယ့် ဂျာနယ်အဆင့်မီအောင်တော့ ရေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်က ဂျာနယ်တိုက်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့လူများ ရွာထဲမှာ ရှိရင် ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကူညီပေးကြပါဦး။
very very good လို့ပဲချီးကျုးထောက်ခံပါရစေ။
အစီအစဉ် နှစ်ဆိုတာ မြန်မာ့အဝန်းအဝိုင်းတွေမှာရှားတတ်ပါတယ်။
၁။ ခွဲမွေးရင် မထွက်။
၂။သားဦးဆိုရင် မမွေးခင်ကတည်းက ကလေးစို့သလို လူကြီးက
၃။ တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရက် ခေါင်းက အထဲဝင်နေတာမျိုးဆို
ရင် ကလေးမွေးကင်းစက မစို့နိုင်၍မထွက်တတ်။
၄။ နို့ တိုက် ရမဲ့မိခင်က အစားအစာကို ဟိုဟာမစား ဒီဟာ
မစား နဲ့ ဟိုရှောင်သည်ရှောင်ဆိုရင်လည်း နို့ထွက်ပါသော်
လည်း အဟာရ ရာခိုင်နုံန်းနည်းနည်းပဲရတတ်။
နို့မုန့် ကို ဒုတိယ အစီအစဉ်ထားဖို့ဆိုတာကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါကြောင်းး။
( copy/past နဲ့ facebook မှာ သဘောတူတူ မတူတူ
ဟုတ်ပါတယ် ကိုမင်းခန့်ကျော်။ နို့မှုန့်ကို ဒုတိယဦးစားပေးထားသင့်တယ်။ ဆေးရုံကနေ မိခင်နို့သာလျှင် အကောင်းဆုံး ဆိုပြီး အတင်းလုပ်ကြတော့ ဆေးရုံမှာ နို့မှုန့်ကို ခိုးသုံးနေကြရတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ရောင်းလှည့်ရင် နို့မှုန့် နို့ဘူးတွေ အသာဖွက်လိုက်တဲ့အထဲမှာ ကျမလည်းပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးဆိုတာက အလွယ်လမ်းကို အင်မတန်ကြိုက်ကြပြန်ရော။
ဒီလိုတဖက်ကပြန်ပြီးခွင့်ပြုလိုက်ရင် မိခင်ဆီကရတဲ့ ဘယ်အဟာရနဲ့မှမတူတဲ့
နို့ဦးရည်ကို တော်၏လျော်၏ နို့မုန့်တွေနဲ့ အလွယ်အစားထိုးမှာလဲကြောက်ရတယ်ဗျာ။
ကျတော်က ဒီဒုတိယဦးစားပေးကို ထောက်ခံပေမဲ့ ဒါဟာတတ်နိုင်တဲ့မိခင်တွေအတွက်
ကောင်းပြီး မတတ်နိုင်တဲ့မိခင်တွေ ကအများစုဆိုတော့ ပြောရမှာခက်တယ်။
ပြောချင်တာက ကိုယ်ဝန်စဆောင်ပြီလို့သိသိချင်း နီးစပ်ရာ ဆေးခန်းတွေမှာ ကိုယ်ဝန်စောင့်ရှောင့်
မူ့ကိုခံယူရမယ်။ ဒီအပိုင်းမှာအစိုးရအကူအညီ အများကြီးလိုမယ်။ နို့ အရေးကိုပဲဦးစားပေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က ကလေးမမွေးဖွားမှီ နီးစပ်ရာဆေးခန်း OG တွေရဲ့စနစ်တကျ စစ်ဆေးခြင်း
စောင့်ရှောက်ခြင်းကို မပျက်မကွက် ခံယူရပါမယ်။
ကလေးမမွေးဖွားခင်မှာ OG တွေက နို့လမ်းကြောင်းဖွင့်နည်း ပြသပါလိမ့်မယ်။ ကလေးမမွေးခင်
နို့လမ်းကြောင်း ပွင့်မပွင့် နို့ဦးရေလုံလောက်စွာရနိုင် မရနိုင် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပြီး မရနိုင်ပါက
နို့မူန့်တိုက်ကြွေးရေးခွင့်ပြုချက် အကြံပြုချက်ကို ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတွင် ရေးသွင်းပေးရမယ်။
ဒီလို တနိုင်ငံလုံးမိခင်တွေကို ကြပ်မတ်တဲ့စနစ်လေးပါ အစိုးရ /ကျန်းမာရေး ဘက်က တတ်တတ်
မိခင်လောင်းနို့ဦးရည် လုံလုံလောက်လောက်မရကြတာ နည်းမမှန်တာလည်းပါပါလိမ့်မယ်။
ဒါက ကျတော့် သား နှစ်ယောက်လုံး မွေးခဲ့စဉ်က စနစ်တကျ OG ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် ကိုလိုက်နာ
လို့ နို့ဦးရည် အလုံအလောက်ရခဲ့ပြီး နို့မူန့် ကူစရာမလိုအောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဒုတိယ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဆိုတာ မိခင် နည်းနည်း အတွက်ပဲလိုအပ်မှာပါ။
ဒါကြောင့် OG တွေ ဆီမှာ သို့ သားဖွားဆရာမ တွေ ဆီမှာ စနစ်တကျ အပ်နှံလိုက်နာ ကြမယ်ဆိုရင်
ဒီလို ကြိုတင်ရေးအပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေကိုလည်း အစိုးရပိုင်းကပါဝင်သင့်ပါတယ်ထင်ကြောင်းပါ။
အမဝင့်ကို လေးစားတဲ့ထဲမှာ ဒါလဲပါတယ် သိလားးး
ကလေးတွေကောင်းကျိုးကို……စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိခင်တွေကို ကျနော်သဘောကျတယ်။
ကျနော်လည်း ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အမေနဲ့ နေခဲ့ရလို့ ကလေးတွေနေရာကလည်း စိတ်လုံခြုံမှုကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။
မဝင့်အတွက် ကလေး ဆောင်းပါးလေးတွေ တိုင်တည်ပြီး ရေးချင်တာကို မ စတင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
သင်ယူလို့မရတဲ့ထဲမှာ မိခင်စိတ်လည်း ပါပါတယ် ဝင့် ရေ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ကလေးကို အသိဉာဏ်ရှိရှိ ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ မိခင်တွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးတစ်ခါမွေးရတာ မလွယ်ဘူးသိလား။ အမေတစ်ယောက်ဟာ ၀ိုင်းပြီးဖိအားပေးခံရတယ်။ အရပ်ထဲက မိန်းမတွေရော၊ ဆွေတွေမျိုးတွေရော အားလုံးဝိုင်းပြီးဖိအားပေးကြတယ်။ အစားရှောင်ခိုင်းတယ်။ အမဆိုရင် အတိုက်အခံတွေ သိပ်မလုပ်ချင်လို့ အစားစားရင်တောင် ခိုးစားရတဲ့အထိပဲ။ အစားမှားရင် ကလေးလေထိုးတယ်ဆိုတာလည်း တကယ်ပဲ။ ခြေမလေးကို ကုပ်ထားပြီး ၀မ်းဗိုက်ကော့ပြီး အော်တာလေ။ လေးခ ကို ဒီပို့စ်လေး ဖတ်မိစေချင်တယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ သူက expert ဆိုတော့ သူဘာများပြောမလဲ သိချင်တာ။
မိခင်လောင်းတိုင်း သိထားသင့်သောပို့စ် ဖြစ်သောကြောင့်
ကျနော်အတွက်ဒီလ အကောင်းဆုံးပို့စ်အဖြစ် ကိုယ့်တွေ့ခံစားချက်
လိုင်းတွေ နှေးနေတာနဲ့ ကွန်မင့်ဖြေတာ နောက်ကျသွားတယ် ကိုကျော်ထိုက်ရေ။ တကယ်လို့ မြန်မာပြည်မှာ နေတဲ့လူဆိုရင် အနီးဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရှိရင် ပို့စ်လေးကို စာရွက်ထုတ်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် ဝေပေးပါနော်။ ပြောလိုက်မှပဲ သိကြတာ။ မိခင်လောင်းတွေဟာ စိုးရိမ်စိတ်များပြီး ဘယ်ဟာ အမှန်ဆိုတာ မဝေခွဲနိုင်ကြဘူး။
နယ်မှာနေပေမဲ့ ခေတ်ကိုပိုလို့တောင် ရှေ့ပြေးနေတဲ့အမမျှစ်ကြော်ကို မလေးစားပဲမနေနိုင်ဘူး။ ရန်ကုန်က မိဘတွေတောင် တလွဲတွေလွဲနေတုန်းမို့ တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်ကလေးမို့ တန်ဖိုးရှိရှိ သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ပါစေချင်မိပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လွဲနေလိုက်သလဲဆို ဟိုနေ့က အသိတယောက် သူ့သမီးလေး လသားလေးဓါတ်ပုံရိုက်တင်တာ နှဖူးမှာ အနှီးစလေးကပ်လို့။ ကြို့ထိုးရင် အနှီးအနားစလေး တံတွေးစွပ်ကပ်ရတယ်ဆိုတဲ့လွဲမှားတဲ့အယူကို ရန်ကုန်မြို့လည် စာတတ်ပေတတ် ဆရာမကလက်ခံကျင့်သုံးနေတာအံ့သြပြီးမေးလို့ သူကတောင်စိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်။ ကလေးဘာမှမထိခိုက်တဲ့ကိတ်စပေမဲ့ အဲလိုအယူတွေလွဲလွဲနေတာ ကလေးထိခိုက်မဲ့ကိတ်စထိလွဲနေမှာ စိတ်ပူမိနေတာ။ အခုအမမျစ်ကြော်ပိုစ့်ကလေးကိုသဘောကျမိတယ်။ ရှဲပရစေအမရေ
မသဲနု – ကျမပြောချင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းက အဲဒါပါ။ မြန်မာတွေဟာ သိပ်ပြီး ရှေးရိုးဆန်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အသေးမွှားဆုံးအစွဲလေးတစ်ခုကအစ (ဥပမာ စပါးလင်ပင် မစိုက်ကောင်းတို့၊ နတ်ကိုးကွယ်မှုတို့ ) ဖျောက်ဖို့မလွယ်ဘူး။ တချို့အစွဲအလမ်းတွေကတော့ တိုင်းပြည်ကို ထိတဲ့အထိပဲ။ ခုတင် အရပ်အမောင်းလူစဉ်မမီမယ့်ကလေး ၂သန်းခွဲထွက်တော့မယ်။ ကလေးတွေ ၀ါးကျွေးခံနေ၇တုန်း။ ရှေးရိုးစွဲသိပ်ကြီးတဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ပညာပေးကိစ္စမှာ ကျန်းမာရေးပညာပေးစာစောင်တွေနဲ့ မရဘူး။ ဆေးရုံကနေ တရားဝင်အမိန့် အနေနဲ့ ချပေးရမှာ။ သားဖွားဆောင်မှာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးတပ်ပြီး ၀ါးကျွေးတာကို တိုက်ဖျက်ရမှာ။ မိခင်တွေကြားထဲမှာ ဒီကနေ့ထိ သို့လောသို့လော ဖြစ်နေရတဲ့ အစားရှောင်ခြင်းကိစ္စမှာ ဆေးရုံကနေ တိကျပြတ်သားတဲ့ အစားအစာစာရင်း ထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်။ မီးဖွားပြီး ဆေးရုံဆင်းတဲ့ မိခင်တိုင်းကို တိကျသေချာတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် ဆေးရုံကနေပေးနိုင်မှ အရပ်ထဲက လက်သည်တွေ၊ တတ်ယောင်ကားတွေရဲ့ အန္တ ရာယ်တွေက ရှောင်နိုင်မယ်။
လူပျိုကြီး အန်ကယ်ကြောင် နောင်ရေးအတွက် သေသေချာချာ အနုလုံ ပဋိလုံ ဖတ်မှတ်လေ့လာထားပါလေ။
အဟိ… မိခင်နို့ ဆိုလို့
ကျောက်စ်နှမလေးနို့ထွက်ကောင်းအောင် နွားမြီးစွပ်ပြုတ်လည်း တိုက်ဖူးသဗျ…
အဲ… ဗိုက်ခွဲမွေးလိုက်တော့ နို့ထွက်မကောင်းလို့ နို့မှုန့်ပါကူရတာပေါ့…
တူမလေးက Diapers နဲ့ပဲနေလာတော့… အခု အသက် ၁၅လ…
အင်အင်းကျင့်ပေးတာမရဘူးတဲ့… Diapers မရှိရင် မအင်အင်းဘူးတဲ့… ဒွတ်ခေါ
ဟုတ်ပါ့ ကိုကျောက်စ်။ diapers သုံးတဲ့ကလေးတွေ အင်အင်းကျင့်ပေးလို့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ညဘက် အင်အင်းပါချရင် အမေ တော်တော်သက်သာတယ်။ ခုချိန်ထိ ကျမ ဗိုင်းကနဲ လဲမသွားအောင် ကူညီပေးနေတဲ့အရာဟာ ကလေးသေးခံပါပဲ။ ဘယ်လူသားမှ မဟုတ်ပါဘူး။
အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်.. အစ်မရေ.. ။
အဟိ.. ကျွန်တော်တော့ ကလေး မမွေးဖူးဘူး။
အလို ကိုမိုးမင်းသား – ပျောက်နေတာကြာပေါ့။ မိုးရွာမှ တစ်ကြော့ပြန်လာမှာလား။
တော်တော်ကို အကျိုးပြုတဲ့ စာပါ…
စေတနာရယ် လေ့လာမှုရယ် ကိုယ်တွေ့ ရယ်ပေါင်းထားတော့ အရမ်းကောင်းတယ်…။
မျှစ်ကြော်ကို ကျနော်လေးစားတာ အဲဒါတွေကြောင့် မျှစ်ကြော်..။
ဒီစာလေး များများဖြန့် ပေးနိုင်ကြရင် တော်တော် အကျိုးရှိမယ်…။
Many new mothers struggle with the decision to breastfeed or bottle feed their new baby. Here’s some guidance to help you choose what’s right for you.
Breast milk is the perfect food for baby, with numerous advantages over baby formula, especially in the first four months or so. Here’s why:
1) It’s always available.
3) It contains active infection-fighting white blood cells and natural chemicals that give increased protection against infections in the first months, when these can be the most serious.
It can help prevent SIDS, sudden infant death syndrome, according to the American Academy of Pediatrics.
It contains the perfect proportion of nutrients that your baby needs, including protein, carbohydrates, fat, and calcium.
1) It is easily digestible.
2) It may protect against allergies and asthma in the future.
3) It may decreaseababy’s risk of obesity in the future.
4) It may contain some fatty acids that promote brain development.
5) Breastfeeding can help new mothers lose weight more easily.
Additionally, there probably are other beneficial components of breast milk that we are not aware of and so are not added to formula.
With all these advantages of breast milk, should you feel guilty if you choose not to breastfeed? Absolutely not!
Infant formulas have gotten better and better at matching the ingredients and their proportions to that of human milk.
While breastfed babies may have relatively fewer infections, the vast majority of infants won’t getaserious infection in the first months whether breast- or bottle fed.
A happy, unstressed mother is the best mother. If you feel that bottle feeding best fits your needs, then it’s the best for meeting your baby’s needs as well.
Tips for Bottle Feeding Baby With Formula
There’s no need to heat the formula for your baby. Drinking it at room temperature is fine.
Onceababy has sipped from formula, it should be discarded. You can, though, save unused formula that baby hasn’t sipped from for the next feeding.
Tips for ChoosingaFormula
Don’t hesitate to pickaless expensive brand of formula if finances areafactor. Most formulas are pretty much the same. More expensive does not necessarily mean better.
Select an iron-fortified formula. There isalot of evidence that iron deficiency in the first years adversely affects brain development. And side effects from iron (gas, constipation, discomfort) while much discussed, are actually very rare.
Pick whichever type of formula — powder, concentrate, or ready-to-feed — best suits your needs. There is no nutritional difference between them. You may want to keep in mind that powdered formula is the least expensive, though.
Choose cow’s milk formula over soy to start with.
ကော်မန့် ဘောက်(စ) ထဲမှာ ဇယားက ကောင်းကောင်းမမြင်ရမှာစိုးလို့။
ကြားဖူးတာတော့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့ မိခင်လောင်းနဲ့ ဖခင်လောင်းတို့ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ၊်ကလေးကို စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်နည်း၊ ကလေးစိတ်ပညာတွေကို မသင်မနေရ သင်တန်းပေးပြီး သင်ကြားစေတယ်တဲ့။
ဒီမှာတော့ အမေက သမီးကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး သင်သွားကြတာပဲ။
ခုခေတ်ကျတော့ ခေတ်မီဆေးပညာနဲ့ မိရိုးဖလာနည်းတွေအကြား သားသည်မိခင်တွေလဲ ဝေခွဲမရကြတော့ဘူး။
လူအများ ဖတ်နိုင်သိနိုင်အောင် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရှယ်လိုက်ပြီ။